Ogologo oge ole ka sọks sọks ga-adị? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Ogologo sọks sọks - olee otu i si ekpebi
Ogologo sọks sọks - olee otu i si ekpebi
Ogologo oge ole ka sọks sọks ga-adị?
Akwụkwọ UCI. Kedu ka anyi nile ga - esi hu ya na dichaa ya. Enwere otu iwu nke ewepụtara n'oge na-adịbeghị anya ma ọ bụ ihe gbasara sọks, ka anyị jụọ ndị na-agba ịnyịnya ihe ha chere banyere nke a yana ihe ezigbo sọks kwesịrị kwesịrị. (Techno music) - (ọchị) Triathletes, kpachara anya. - (ọchị) (Hiss ikuku) You bụ nwoke mara mma, m ga-ekwu ogologo sọks. Kedu ihe bụ sọks nke zuru oke? - Ugbu a ajụjụ na-ebilite banyere overshoe, n'ihi na ndị ọzọ nọ ebe ahụ ọzọ na egwu, ma ee, mgbe niile na njedebe.
Yabụ, nnukwu ego bụ itinye akara na ụkwụ gị karịa akụkụ alpha gị nke ụkwụ yana ee, kpoo sọks gị na oke - ikekwe egbugbu n'ụkwụ gị? - ikekwe egbugbu, mana m amaghị na ọ dị mma, buru egbugbu ahụ ebe ahụ. (ọchị) - you bụ onye na-akwado ndị na-adịkarị ka ndị egwuregwu atọ ma ọ bụ ndị ọgba bọọlụ na igwe kwụ otu ebe ma ọ bụ na ọ bụghị? - (ọchị) Triathletes, kpachara anya. (ọchị) - Ee, ọ dị m nwute. - Ee, echere m na ọ toro ogologo, ọ dị ogologo.
Enwere m sọks a. Ejiri m ha ọtụtụ na Giro ma ha dị ogologo oge ma gbatịa ma gbatịa, ugbu a ha toro ogologo. - Oh ee. - Ee, ee, ọ dị mma.
Ma nke ahụ toro oke ogologo, ee echere m na ọ nwere ike ịbụ ogologo oge, nke ahụ bụ eziokwu. N’ihi ya, ọ naghị amasị m ịgabiga iwu UCI. Nke a bụ naanị iwu UCI m chọrọ ịkwanyere ùgwù - (ọchị) - Ogologo oge ole ka ogologo? Ọ bụrụ na ọ gafere nwa ehi gị ọ toro oke - ebe anyị nọ, ọ dị mma ma dịkwa mfe - echere m na ọ dị ka, ain Mgbe ị na-ele ụfọdụ nsogbu ndị ọzọ na ịgba ịnyịnya ígwè anyị na-eche na ọ bụ nnukwu egwuregwu mgbe ị na-ele ụfọdụ nsogbu ndị ọzọ anya. anyị na-eche ihu n'ịgba ígwè.
Mana echere m na ọ ga-adị ka nke ahụ, n'ịgba ịnyịnya a ọdịnala na-enye obi ụtọ na anyị ga-enye ya ara bụ etu igwe kwụ otu ebe siri yie igwe kwụ otu ebe dịka ha mere n'oge ahụ. Ha abụghị, ha adịghị ka ha ga-esi na Toyota Corolla gbanwee gaa ụgbọ ala Formula 1. Ha ka nwere ụdị silhouette ndị bụ isi nke igwe kwụ otu ebe ebe ahụ, ha chọrọ ugbu a ka ọdịnala ịgba ịnyịnya ígwè dị ndụ.
Enwere m ike ịhụ nke ahụ. Ọ ghaghị ịdị mfe, ị gaghị enwe ike ịhapụ ndị mmadụ ka ha gbanyụọ akara mmalite wee wepụ sọks ha mgbe ha gafere gh na nlele ma mesịa. Echere m, nke ahụ bụ ezigbo obi ike.
Yabụ na enwere ike ịmasị ntakịrị. Echere m na ọ mara mma, UCI niile na-enyocha mgbe mbụ ọ bịara bụ ihe na-atọ ụtọ ugbu a, mana ị ga-achọ ụdị. Anyị ga-apụ na bọs tupu anyị atụe etiti dị n'etiti ikpere ụkwụ anyị na ikpere, mgbe ahụ ị ga-adọta obere ahịrị abụọ dị sentimita asatọ karịa etiti.
Nke ahụ bụ, ee, m tụrụ ya n'onwe m, nke ahụ bụ ahịrị. 'O wee sị,' Oh, dịkwa mma, ị rụrụ ọrụ m maka m. 'O doro anya, ọ dịghị mgbe m mere. - O doro anya. - Mana ee, ihe a niile, nke ahụ bụ ihe niile ugbu a n'ihi na ha nwere nke a ọ dị mma.
Yabụ otu ụzọ dị gburugburu ya bụ ịdọta sọks gị ka ịmalitere ụkwụ. - Gịnị bụ ezigbo? Sock ogologo? Enwere? - Echere m, ọ dị elu dị ka o kwere mee maka Aero. Maka akara tan, ọ bụ sọks nkwonkwo ụkwụ.
Maka ihe ị na-eme kwa ụbọchị, a ga m asị na anụ ọhịa dị n'okpuru oghere nwa ehi gị na elu sọks gị - Lee anyị. Look dịcha iche taa, ọ bụghị ya? Mana inwere ihe mmado nke gi. N'ezie enwere ezigbo anyaụfụ maka ndị a.- O doro anya na ihe ndị ọzọ na-echegbu m, yabụ ọ bụrụ na mmadụ abịa site na ahịrị mmalite wee wepụ sọks m, mgbe ahụ ọ dị mma- (ọchị) - Kpọrọ.- M ga-achọ ịhụ nke ahụ.
Otu onye biara wepu sọks gị - ee- enwere nnukwu ihe n’ụwa na-echegbu onwe gị. - Kpamkpam, maa. Ọbụghị naanị na ụwa, mana na ịgba ịnyịnya ígwè kwa, anyị nwere ike ichegbu onwe.
Anyị nwere ihe dị iche iche iji lekọta. - Aga m asị na ọ bụ nke abụọ na usoro iwu ị kwesịrị ịkwado - Ezigbo nwoke. Kedu ihe bụ ezigbo sọks dị ogologo maka gị? - Ihe ọ bụla ha nyere m - ahụrụ m nwoke a n'anya (chịrị ọchị) - A maara m nke ọma ma chee na enwere ike ịhapụ ọkara.
N'etiti etiti nkwonkwo ụkwụ gị na --- ikpere gị? - n’elu elu shin gị. Amaghị m. - Ee, ihe ọ bụla.
Nke m chere, n'eziokwu, mgbe inwere ha ọkara, ọ naghị adị mma. Ya mere, ogologo kachasị mma maka ịchọ mma ga-adị ntakịrị ala, agbanyeghị na amaghị m ma ọ bụrụ na ịnwe sọks aero dị ngwa. Site na ihe a gwara m na ọ nweghị ihe dị iche, yabụ ịmara, ọ bụrụ na ha nwere iwu nke kwuru na ọ ga-abụ ọkara, enwere m ike ịnweta ya obere obere, ka ị ghara ịbụ nzuzu na anya .- Ma gịnị banyere taa? Rock jijiji ogologo zuru oke, ị pụtara? - Ee, amaghị m.
Ee, ha mara ezigbo mma. Anyị nwere sọks DeFeet. Ya mere, m ga-asị, enwere m obi ụtọ na nke ahụ.
Ha nwere ike ịbụ obere oge karịa m naanị maka na m nwere ogologo ụkwụ mara mma, mana agaghị m ekwu na ịchọrọ karịa nke ukwuu, nri? Sọks dị ọcha dị ka ndị a n'ebe a n'Australia. Enweghị ike iti ya. Chọrọ ka tan? Ọbụbeghị.
Ahụbeghị m ezigbo anwụ ruo ọnwa atọ. Ruo ugbu a ọ bụ naanị aka m. Ọtụtụ sunscreen yabụ na ọ bụrụ n’izuụka abụọ mgbe anyị na-aga, a ga-acha m. - Eeh, enweghị m ike ịgabiga ya okwu na-ere ọkụ.
Lelee ọnọdụ m. Mma, bee. (ọchị) - echebeghị m banyere nke ahụ.
Echere m, echere m na n'ụzọ ụfọdụ, ọ ga-aka mma karịa onye ọ bụla na-eji tubes na ihe na-agagharị, dịka sọks ikpere. Kedu nke bụ teknụzụ karịa na teknụzụ, dịka m ghọtara ya, ọ dịghị mma mgbe ị gara n'ụsọ osimiri, ọ dị oke egwu, mba, enwere m sọks dị elu, ma ọ bụrụ na ọ bụ naanị sọks, anaghị m eche. Mana mgbe ndị mmadụ na-anwa iji ohere wee gbagoo ngwugwu mkpakọ a.
N’ụzọ, iwu bụ iwu, achọghị m ịma nke ahụ. - Ọ dị mma, enwere ogologo sọks maka gị? - Ọfọn, m ga-eme ya ogologo oge, ọ bụghị dịka sọks nkwonkwo ụkwụ ahụ. - Mba - abughi m nnukwu onye ife ya.
Ma ee, ụdị dịka ụdị ụdị nha a. Aghaghị m idozi ya n'ụzọ ziri ezi. Ma nke ahụ bụ ụdị ezigbo, achọghị m.
N'okpuru nwa ehi ahụ. - Echere m Ọfọn, m ga-ekwu nke ahụ.- Ọfọn daalụ nke ukwuu.- Ọ kwụ m n'akụkụ n'akụkụ m. M ga-ekwu ya.- Ee, m ga-echere ka m hụ isiokwu iji hụ ihe ị ga-ekwu ma emee (ọchị ), - Mba, m dị mma nye gị.- Ee, ihe niile dị jụụ.- Ọ bụ ụmụ nwoke ndị ọzọ.- Ee, ee, nke ahụ dị mma, m makwaara ha.- Nke mbụ, echere m na enwere ike ndị ọzọ Iwu ile anya tupu ichegbu onwe gi banyere ogologo sock.
Ma ee, n'ihi na m na ọ bụghị dị elu, ọ bụghị obere ala ụdị ụzọ dị elu na-adị elu, ụfọdụ ụmụ okorobịa chọrọ ịga ala dị ala anaghị echegbu m. Ha adighi nma - Ugbu a anyi na-ekwu okwu banyere sọks, ị bụ otu n'ime ndị agha na-enweghị sock na Olympic, ọ bụghị gị? - Anyị na-aracha sọks anyị kpamkpam afọ niile tupu ọchị ahụ maka egwuregwu e Olympics. Ma mgbe ahụ, na-atọ ọchị, ọtụtụ otu amaliteghị iyi sọks, mgbe ahụ anyị rutere n'egwuregwu Olimpik anyị wetara sọks aero ma ha ka na-agagharị na-enweghị sọks.
Yabụ na ọ bụ obere egwuregwu ime ihe n'eziokwu. Mana mba, anyị niile nwere sọks aero maka egwuregwu. Wouldnye ga-eche na sọks nwere ike ịbụ mkparịta ụka na-adọrọ mmasị? Ka a pụọ.
Ihe ndị a na-eche banyere sọks dị ogologo. Ihu ọma, ọ gaghị agbatị ikpere, ọ kwesịghịkwa ịbụ na nkwonkwo ụkwụ gị. Ebe dị n'etiti.
Ọzọkwa UCI kwesịrị ileba anya na iwu ndị ọzọ karịa nke otu gbasara ogologo sọks. M ụdị kwenyere. Mee ka anyi mara na akuku ndi di n'okpuru, ihe kacha gi nma sock.
Ndi UCI kwesiri itinye iwu a? Tinye aka na ngalaba nkọwa a. Echefukwala ileba ụlọ ahịa GCN na shop.globalcyclingnetwork.com.
Ma ugbu a, maka ederede abụọ ọzọ siri ike pịa ebe a n'okpuru ebe a. Aga m aga tinye ọzọ sunscreen. Ma eleghị anya, dọpụta akwa sọks m.
Kedu ihe kpatara ndị na-agba ịnyịnya ígwè ji eji sọks toro ogologo?
RELATED: Ọ bụ oge iji bulie gịSockEgwuregwu
Na isiokwu nkesọkselu, anyị ọkachamara bụ na nkwekọrịta: anọ na isii sentimita asatọ nwere ike dị nnọọ mma maka ọtụtụ agba. Ọ bụghị ihe mgbagwoju anya, Phinney nwere usoro ziri ezi. Iji gbakọọ ihe kacha mmasọksogologo, buru ụzọ gbanwee ikpere gị ruo ogo 35, ka Phinney na-ekwu.Eprel 1 2016
Kedu ihe kpatara sọks dị oke mkpa ji agba ịnyịnya ígwè?
Yabụ ọtụtụ ụzọNdị na-agba ịnyịnya ígwè na-eyi sọks sọksma ọ bụ n'ihi na ọ na-enyere ha aka (mgbesọksbụ aerodynamic) ma ọ bụ chọọ ọkachamara.Ogologo sọksnwekwara ike igbochi ọsụsọ nke na-agbada ụkwụ gị iru na nkwonkwo ụkwụ na ụkwụ gị ma gbochie obere okwute na-efegharị n'ime gịsọks.Ọkt 13 2020
Kedu ka ị ga-esi tụọ ogologo sọks ịnyịnya?
Maka ndị nọ n'imeịdị elun'oge okpomọkụ, na mmiri wicking mmetụta nke sịntetiksọksna-arụ ọrụ site na iduzi ọsụsọ site n'ọbụ ụkwụ ruo na akpụkpọ ụkwụ n'èzí, na-eduga na ntigbu nkenweremmetụta jụrụ oyi na ụkwụ ọkụ.Ọnwa Ise 17, 2017
Socks ịnyịnya ígwè nwere uru ọ bara?
Ee, ị ga-emeli ya. Mana, dịka enwere nkọwa zuru oke dị ka mpaghara ejiri nwayọ na njemsọks, ụfọdụ njirimara nasọks ịgba ígwèmee ka obi ruo ha ala mgbe ị na-agba ịnyịnya.Igbapu sọksdị gịrịgịrị ma dabara adaba n'ihi naigwe kwụ otu ebeAkpụkpọ ụkwụ dabara adaba ma enweghị ike ịnabata nkasi obi zuru okesọks.
So Compression Socks dị mma maka ịgba ígwè?
Cygba ígwè mkpakọ sọks, dika CEPsọks ịnyịnya, na-enyere aka iwepụ lactic acid mgbe ọ na-ewuli elu n'oge ọrụ siri ike. Inye onyinyemkpakọ sọksmgbe mgbatị ahụ na-enyekwara mọzụlụ gị aka ịgbake. Mgbe onye na-agba ịnyịnya, na-edebe gịsọkson ga-enyere aka belata ahụ mgbu, njigide mmiri na ọzịza.16.02.2018
Really chọrọ n'ezie sọks ịgba ígwè?
Ee,gịnnọọ ike. Mana, dịka enwere nkọwa nnabata dị ka mpaghara ejiri nwayọọ na njemsọks, ụfọdụ njirimara nasọks ịgba ígwèmee ka obi ruo ha ala mgbegịnọkwasi.Igbapu sọksdị gịrịgịrị ma dabara adaba n'ihi naigwe kwụ otu ebeAkpụkpọ ụkwụ dabara adaba ma enweghị ike ịnabata nkasi obi zuru okesọks.
Ugboro ole ka m kwesiri ịsacha obere ịnyịnya ígwè?
Uwe elu na sọks - ee - mgbe ọ bụla ojiji.Obere igwe- mba, obughi mgbe obula ojiji. Ọ bụrụ na ọ bụ ogologo njem, aga m. Ma ọ bụghị, Msaaha banyere ọ bụla 3-4 agafe.Eprel 1 2006
Gini mere eji agba sọks nwa ehi?
Sitnọdụ ala n'elu nkwonkwo ụkwụ,ufọt ufọt- igwesọks ogologobụ nhọrọ kachasị ewu ewu na ndị na-agba ịnyịnya. Inye nkwado dị ukwuu nke ụkwụ na nkwonkwo ụkwụ na-enweghị mmetụta dị oke elu ma ọ bụ dị mkpụmkpụ, ha na-enyekwa aka na nchebe nkwonkwo ụkwụ ma ọ bụrụ na ha enwee okuku.05.17.2017
Kedu ihe pụrụ iche gbasara sọks ịgba ígwè?
N'ozuzu,sọks igwe kwụ otu ebenwee atụmatụ ndị a:Igbapu sọksdị gịrịgịrị ma dabara adaba n'ihi naigwe kwụ otu ebeAkpụkpọ ụkwụ dabara adaba ma enweghị ike ịnabata nkasi obi zuru okesọks.Igbapu sọks, dị kasọksn'ihi na ọtụtụ ihe aerobic, bụ nke wicking, ngwa ngwa-akọrọ iji belata nkasi obidikaụkwụ gị ọsụsọ.
Kedu nke kacha mma sọks ịnyịnya ígwè?
Stuart Clapp na-atụle ogologo na mkpụmkpụ nke sock na-agba ịnyịnya ígwè na nke na-emekarị. Ma otu ogologo ọ dị ogologo karịa nke ọzọ? Enweela ọtụtụ okwu banyere ogologo nke hosiery ịgba ịnyịnya ígwè n'oge ahụ, na maka ejiji ejiji, ọ ghọrọ ezigbo ọkpụkpụ nke esemokwu. Ya mere, olee kpọmkwem ogo ziri ezi maka otu sọks ịgba ígwè?
Enwere iwu ọhụrụ maka sọks na ịgba ígwè?
UCI eweghachiri iwu iwu sọks maka oge 2019. Ka elekere na-adalata ka mmalite nke oge ịgba ịnyịnya ígwè ọhụrụ na Jenụwarị, òtù na-achị isi na-emezigharị ụkpụrụ ya maka afọ na-esote. Mgbanwe maka 2019 gụnyere ntughari nke ule oge otu, usoro ọgbara ọhụụ ụwa na ugbu a kachasị sọks dị elu.
Kedu ka ị ga-esi mara ogologo sọks gị kwesịrị ịdị?
Iji gbakọọ ogologo sọks kachasị mma gị, buru ụzọ gbanwee ikpere gị ruo ogo 35, ka Phinney na-ekwu. Anyị ejighị n'aka ebe ọ nwetara ogo 35, mana anyị anaghị eche na anyị ruru eru ịjụ ya. Phinney kwenyere na sọks gị ga-ada otu anụ ọhịa n'okpuru nwa ehi ahụ na mgbada ikpere 35. Ma ọ bụ, ị nwere ike ịga na sentimita isii wee kpọọ ya otu ụbọchị.